Chii chinonzi upcycling uye kuti chinobatsira sei | | Bezzia
Chii chinonzi upcycling
Tiri kugadzira inowedzera uye yakawanda marara uye nekudaro zvinonetsa kwazvo kuti nharaunda irege kukanganiswa. Isu takaona kuti kugona kukuru kunotitungamira kuti tigadzire matani emarara gore rega. Nekudaro, kudzokororazve yave chinhu chakakosha kuti kudzikise kuwedzera kwemarara. Iyo upcycling chiitiko chakanakisa chinotarisana nekudzokorora uye kugadzirisa izvo zvaunazvo.
El upcycling inozivikanwawo seupcycling. Izwi iri rinotiudza kuti kudzokorodza kunoshandiswa zvine hungwaru kugadzira chimwe chinhu chakakosha, chakakosha kupfuura icho chataimbova nacho, nokudaro tichiwedzera izwi kumusoro. Pasina kupokana, izano rakanaka kuburitsa kukosha kwakanyanya nepfungwa yekudzokorora uye kuti vazhinji vanoona kuti zvakare chimwe chinhu chinobatsira.
1 Iko kukwira bhasikoro kunobva kupi?
2 Upcycling mumafashoni
3 Ucycling mune hunyanzvi kana kushongedza
Iko kukwira bhasikoro kunobva kupi?
Upcycling iri izwi risiri idzva, nekuti rakaonekwa mumakore makumi mapfumbamwe. Asi zvaisazove kusvika kuzana remakore idzva apo izwi iri raizowana kukosha. Mumakumi mapfumbamwe makumi mapfumbamwe mamiriro ezvakatipoteredza anga achiratidzika kunge akakosha zvakanyanya asi ikozvino tave kunyatsoziva nezvematambudziko ekuti vatengi nemhando yehupenyu yatinotungamira inogadzira mune zvakasikwa munguva pfupi uye yakareba. Ndokusaka paine mazano mazhinji ari kuwedzerwa kunzira nyowani dzehupenyu senge kusimudzira bhasikoro, iri pamusoro pekushandisa iyo zvishandiso isu tatova nazvo kugadzira chimwe chinhu chitsva uye chakakosha, chimwe chinhu chinogadzira chinogona kushandiswa zvakare. Iri izwi rakakosha kwazvo munyika yefashoni uye yehunyanzvi.
Kune mafemu mazhinji akatobatana nepfungwa nyowani zvachose. Zviri nyore kuona zvinyorwa mune mazhinji emafemu anotiudza kuti mbatya dzawo dzakagadzirwa kubva kune mamwe machira akashandiswa kana zvakare kubva kune zvimwe zvinhu zvakaita segirazi kana zvigadzirwa zvepurasitiki. Izvi zvinoita kuti tione kuti hatisi kungotenga fashoni chete, asi tiri kutengawo chipfeko chinobva kuzvinhu zvakashandiswa zvakare kugadzira chimwe chinhu chitsva icho zvakare chine ukoshi hukuru, chichiita kuti chishande zvakare. Pfungwa mufashoni yakapinda uye kune mafemu emabhizimusi akadai seH & M kana Zara ayo anosanganisira iyi mhando yenguo. Tarisa pazviratidzo uye iwe uchaona kuti mazhinji akagadzirwa nezvinhu zvakashandiswa zvekare, saka iwe unozoziva kuti urikuchengeta nharaunda panguva imwe chete yaunofarira fashoni nyowani.
Ucycling mune hunyanzvi kana kushongedza
Imwe nzvimbo yatinogona kuwana izwi iri ndeiya yeunyanzvi. Nyika yehunyanzvi yakashandisa iyo yekusika vein kugadzira zvinhu nyowani nezvinhu zvakagara zviripo. Nhasi kune izwi rekutumidza zita iri uye uyezve uye vazhinji maartist ari kusarudza kupa hupenyu hutsva kuita zvidimbu uye zvigadzirwa izvo chero munhu angarasa. Iyo imwe nzira yekushandisa zvinhu izvi kune chinangwa chakanaka, kudzivirira kuti vasasvibisa zvimwe.
Panyaya yekushongedza, iwe unogona zvakare kuwana mamwe mazano kwetemu ino. Kune marambi anogadzirwa nemakristasi kana zvishongedzwa simbi uye zvakare machiraSezvinoonekwa mumafashoni, machira anogona kudzokororwa kubva kune mamwe machira ekare akaraswa. Nenzira iyi tichava nemusha umo marara achavapo nenzira dzakawanda. Kunyangwe kunakirwa nehunyanzvi kana kushongedzwa uye fashoni tinogona kunge tiri kubatsira nharaunda panguva imwechete uye rudzi urwu rwekuziva ndirwo runodiwa nhasi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Lifestyle » Chii chinonzi upcycling
Zvinhu zvekuita mushure mekudzidziswa
Makiyi ese echoko penda